Adeegyada Gaadiidka Rayidka oo hab casri ah loo sameeyay+sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Ali Abdulkadir Ali / June 3, 2020 June 3, 2020
Muqdisho (SONNA) Waaxda gadiidka rayidka ah ayaa lagu sameeyay isbedelka dhanka horumarinta adeegyada gadiidka dadweynaha,si bulshada Soomaaliyeed loogu fududeeyo adeegyada ay baahida u qabato.
Xarunta waaxda gadiidka Rayidka ee wasaaradda Gadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya waxaa si maalinle ah u yimaada darawalada gadiidka kala duwan,oo usoo doonta agabyada gadiidka sida sharciga wadiska gadiidka ee( leesinka).buuga gaariga iyo taargooyina.
Hase ahaatee warbaahinta Qaranka ayaa booqtay howsha ka socoto inoo kula kulanay dhalinyaro badan oo usoo doontay dhameystirka sharciyada gadiidka,waxaana ka mid ah Faarax Saciid Cabdi oo ah wade gadiidka dadweynaha ee Caasimadda,waxa uu inoo sheegay in si fudud uu ku helay adeegyadii uu uga baahnaa isagaa gacanta ku heystay taargooyin iyo buugaagta gadiidka ee uu usoo doonta .
‘Waxaan casriyeen ku sameeynay guud ahaan adeegyada aan bixin sida leesinka oo ka dhignay laf iyo sidoo kale in aan fududeyno bixinta buuga gaariga iyo taargooyinka inooga shacabka ugu adeegeyno si xushmad leh iyo daacadnimo ku jirto”ayuu ku daray Mowliid Xuseen Cumar agaasimaha waaxda Gadiidka Rayidka.
Marka laga soo tago adeegyadaasi la casriyeeyey,dhanka kale waxaa jira dhibaatooyin ka taagan qaadashada sharciyadaasi,gaar ahaan inta badan bulshada,waxaana jira dad maalin kasta loo soo qobto sababo la xiriira sharciyada waddo marista oo aan haysan,sida Leeysinka,Buugga gaariga aan canshuurnayn iyo kuwo kale.